Però: Fanavakavahana eny amoron-dranomasina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2017 20:15 GMT
Milaza ny olona fa tsy misy maharatsy ny miasa, fa tsy misy asa tokony hahamenatra izany. Toa mitombona izany, nefa toa tsy ny rehetra no mieritreritra toy io. Maro amin'ireo Peroviana, izay eritreretin’ny olona sasany fa maro loatra, no mandao ny tanindrazany mba hitady asa tsara kokoa any ivelany, izay matetika dia miafara aminà asa izay tsy nataony taty an-toerana na dia tany anatin'ny nofiny ratsy indrindra aza. Angamba ny tsy fisian'ny olona fantatr’izy ireo ho vavolombelon'ny fijaliany no mampihena ny fahafahambaraka sy ny fahatsapany ny tenany ho tsy misy vidiny noho ny fanaovany asa ambany noho ny vitan'ny olona. Saingy tsy voatery mandao ny firenena vao miaina anaty asa ahitàna fanavakavahana sy fanaovana anjorombala.
Fahavaratra izao any Lima sy any amin'ireo toeram-pialantsasatra amoron-dranomasina akaiky azy. Taona maro lasa izay, hatramin'ny taona 60, dia i Miraflores, Barranco sy Chorrillos ary koa ireo torapasika lavitra kokoa any Ancón no torapasika nanara-damaody. Amin'izao andro izao, izay efa nisesisesen'ny fahavaratra maromaro taorian’izay, dia any atsimo indray no misy ny torapasika be mpandeha. Amin'ireo torapasika marobe manerana ny morontsiraka mankany atsimon'ny renivohitra, dia ilay toerana antsoina hoe “Asia” no tena tian’ny ankamaroan'ireo mpanankarena mponin’i Lima ary amin'ny teny anglisy no matetika hanononan'ireo mpandany ny fahavarany any an'io anarana io. Malaza noho ny fanomezany ny tsara indrindra ho an'ny mpanjifany manokana io toeram-pialantsasatra io. Raha ny marina, dia efa niova ho tanàna kely mihitsy io torapasika io miaraka amin'ireo fanatitra rehetra omen'ny vaninandro maoderina sy ny fanatontoloana, tsy hitan'ny mason'ilay tanàna izay nandany ny fahavarany tany ihany koa taloha.
Saingy tato ho ato, nanjary fanta-daza ihany koa i Asia noho ny fanavakavahana sy ny fanaovana anjorombala ireo “mpiasa an-trano” na “sôlafa” araka ny fiantsoan’ny ankapoben’ny fianakaviana izay mampiasa azy ireo. Ireo mpiasa ireo, ohatra, dia voarara tanteraka tsy hiditra amin'ny torapasika mandritra ny andro. Aorian'ny amin'ny 6 ora hariva ihany izy ireo vao avela miditra amin'ireo faritra ireo. Mazava ho azy fa maro no mihevitra izany ho tsy rariny sy miteraka olana tsy azo lavina amin'ny fanavakavahambolonkoditra.
Noho izany, namorona bilaogy ny Biraon'ny Mpandrindra Ara-panjakana ny Zon'Olombelona Miady amin’ny Fanavakavahambolonkoditra, izay ahitàna andrimpanjakana sy olontsotra samihafa, mba hampahafantarana ny hetsika antsoina hoe “Mpiasa Sahy” izay ahitàna vondron'olona mitafy toy ireo mpiasa an-trano vavy miditra am-pilaminana ao amin'ny iray amin'ireo torapasika tsy azo aleha mandritra ny andro ary mandro ao. Misy fampahalalana bebe kokoa azo jerena ato amin'ity lahatsoratra ity: Fanontaniana sy valinteny momba ilay Hetsika Mpiasa Sahy. Natao tamin'ny Alahady farany teo (28 Janoary 2007) ny hetsika, vita tsara niaraka taminà lahatsary sy sary. Nisy ny akon'io hetsika io ihany koa tao amin'ny gazety.
Koa satria tsy nisy zavatra mety hitranga ankoatra izay, dia maro ireo bilaogera namerina ilay fotokevitra sy namoaka momba ilay hetsika na taloha na taorian'ny nisehoany:
Saingy tsy ity ihany no hetsipanoherana nitranga tato Lima tato ho ato. Ny iray hafa dia nitranga tany amin'ny Plaza de Armas ao Lima, manohitra ny drafitry ny filoha hamerina indray ny sazy fanamelohana ho faty ho an'ny heloka bevava sasany. Ahitana ireto manaraka ireto ireo lahatsoratra momba ilay hetsipanoherana: “Ny Fahafatesana irery ihany ve no afaka miditra amin'ny Lapan'ny [Filoha] [ES]“, “Ny Fahafatesana ihany no afaka miditra amin'ny Lapa [ES]” ary ny “Hetsi-panoherana ny fahafatesana: Ireo Fisaintsainana Farany [ES].” Mikasika ireo bilaogera sy ireo antsipirihany hafa, dia namoaka ny “Fihetsiketsehana nahomby tao amin'ny Plaza de Armas” sy ny “Fihetsiketsehana nahomby tao amin'ny Plaza de Armas (2) ny Gran Combo Club.”
Eny, araka ny hitanao, tamin’ny fikarakaran'ireo olompirenena marobe teto Lima hetsipanoherana nampiasan'izy ireo loharano an-tserasera eto an-toerana no niantombohan’ny taona. Gabriel Rodriguez avy ao amin’ny Peru Design no mpaka ireo sary nandravaka ity lahatsoratra ity.